Data mgbake bụ iji jide n'aka na ọdịnaya nke ike mbanye na-weghachiri eweghachi enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu ma na enyemaka nke wuru na functionalities nke kọmputa ma ọ bụ site na wụnye bụla ọzọ software usoro. Ụzọ kasị mma izere nsogbu kpam kpam bụ site n'ịhụ na ezuru nkwadebe e mere na nke a mere na Disaster Iweghachite ma ọ bụ DR atụmatụ pụrụ ulo oru. A nkuzi e dere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi ihe ọmụma banyere 5 kasị mkpa data mgbake software mmemme na-dị na ahịa. Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ na-akawanye ịmata interface mere na mmejuputa dị iche iche iwu na-aghọ mfe ma dị irè.
5 mgbake ngwaọrụ na-arụ ọrụ na Linux
Ndepụta na a ga-kwuru mgbe e mesịrị comprises nke ndị omume nke na-abụghị nanị nke elu àgwà kamakwa jide n'aka na data mgbake e mere mfe ma n'ụzọ kwụ ọtọ n'ihi na ndị niile ọrụ ndị na-eji Linux ma na-adịghị tech savvy mgbe niile. Ihe omume ndị a na-eguzo naanị na maka otu ihe ahụ ha na-arụ ọrụ na ha onwe ha na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ software omume nwụnye. Ọ pụtara na ọ bụ nanị wụnye ọ bụla nke 5 omume kwuru ga-eme ka n'aka na data na-natara site ndị ndi nke Linux sistemụ si ebe ọ na-apụghị enweta ma ọ bụ natara na iji omenala ụzọ.
1. World Nnapụta
Nke a na usoro nwere ike na-ahuta ka ndị kasị mma software na dị maka ọdachi mgbake nke Linux os. Ọ na-akwado niile ochie na ndị ọhụrụ nsụgharị nke Linux malite I386 ka FreeBSD. The mma atụmatụ dị ka nke ọrụ nwere gosiri a usoro bụ na ọ na-akwado mpụga nchekwa ngwaọrụ dị ka etere na CD / DVD dị ka nchekwa ngwaọrụ maka data ndabere.
-ndị Abụghị wakporo faịlụ usoro nwere ike ịbụ ndabere na iji nke a usoro na mgbe ọ na-abịa mweghachi ya nwere ike mere ụdị wakporo faịlụ usoro nke na-agụnye mgbọrọgwụ nkebi.
-ndị Diski ike partitions nwere ike restructured.
-ndị Interface nke usoro ihe omume bụ mgbagwoju maka a nkịtị onye ọrụ ọ bụ nnọọ ike iji.
Onye ọ bụla hụrụ na-free omume online na ihe niile dị otú ahụ ọrụ Ule Disk bụ a ere dị ka ọ bụ free iji na ọ dịghị ebubo ide. Ọ na-e nanị mepụtara iji jide n'aka na nke furu efu disk partitions na-natara ndị niile ndi nke disk na-abụghị bootable na ofu iji jide n'aka na ha na-aghọ bootable ọzọ. Njehie gwara mere site nje virus na-malware nwekwara ike ofu eji ngwá ọrụ a nke na-eme data mgbake nnọọ ngwa ngwa na mfe.
-ndị Nkebi table nwere ike ofu site na iji software na ọ bụrụ na nkebi e ehichapụ accidently mgbe ahụ, ọ pụkwara gbakee.
- NTFS buut oru nkwado ndabere na mpaghara mgbake bụ-ekwe omume.
-ndị Omume bụ na-emeghe-ndụ nke na-eme na ọtụtụ Mmepe na-emelite nke na-akpata chinchi na njehie mgbe ụfọdụ. Ọ na-akpata na-ezighị ezi mgbake nke data.
Ọzọ dị ike na-egwu ngwá ọrụ nke na-eme n'aka na data mgbake bụ ngwa ngwa na pụrụ ịdabere na. Nchekwa oyiri dị ka aha ya na-atụ aro na-eme ka n'aka na ihe dị ukwuu data olu dị ka o kwere na-natara enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ngwá ọrụ a na-eji mpụga nchekwa media dị ka CD, DVD na Bluray dị ka isi iyi nke data mgbake nke bụ otu n'ime ndị kasị mma atụmatụ awa.
The esonụ bụ ụfọdụ n'ime uru na mwepu nke na-eji ngwá ọrụ maka Linux data mgbake:
-Ọ Maa na-enye ndụ ọhụrụ na faịlụ na-emi odude ke mebiri emebi media.
-ndị N'ozuzu ojiji nke ngwá ọrụ dị mfe na data mgbake nwere ike mere dị nnọọ ole na ole clicks.
-Ọ Specifies na skips na diski ike nha nke nwere ike ime ka nke na-agbake data si isi iyi.
Ọ bụ ihe ọzọ pụtara ngwá ọrụ na e mepụtara na-eme ka n'aka na data na-natara site ahụ mebiri emebi ma ndị agadi ike draịva, CD-ROMS, DVD ROMS nke bụ malfunctioning. Dị ka aha na-atụ aro a usoro a na-eji na-eme ka n'aka na data na-natara site igwefoto dijitalụ ebe nchekwa dị ka nke ọma nke bụ n'ezie na ụdị nke foto. Ya ozugbo na-aga n'ihi data eleghara faịlụ usoro ke ebe ruru ka nke data si idiọk mebiri emebi media nwekwara ike-eweghachi enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
-ndị Interface nke usoro ihe omume enwekwu ọ usability dị ka a novice ọrụ nwekwara ike na-arụ ọrụ nke usoro ihe omume mfe.
-As Kwuru tupu data mgbake si merụsịrị mebiri emebi media bụkwa ekwe omume enweghị ihe ọ bụla nke.
-Again Ngwá ọrụ bụ na-emeghe ndụ nke na-eme ọ bụ ihe ọjọọ na-ahọrọ n'ihi na ndị niile ndị ọrụ na-nke elu larịị ruru glitches na chịnchị na-okosobode.
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị nwere ọgụgụ isi mmemme na-free na-emeghe ndụ. The ọdịnaya si ngọngọ disk na-depụtaghachiri ka ndị ọzọ mbanye site na nke a omume na n'oge usoro a ma ọ bụrụ na Gụọ data encounters njehie mgbe ahụ usoro ihe omume na-eme ya kasị mma na-eme ka n'aka na data-kụziri elu ozugbo na ebe mbanye. Naanị ihe onye ọrụ kwesịrị ime bụ ime ka n'aka na log faịlụ na-agụ ma na-agba ọsọ na agbara.
-ndị Ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na-akpaghị aka na data mweghachi dị irè na oru oma.
-ndị Ọjọọ ndi nke disk na mkpa nfiksi na ahụrụ site omume na pụta ìhè.
-ndị Log faịlụ ike ga-eji na-agụ multiple iwu nke na-idetuo dị iche iche ebe nke faịlụ. Ọ na-eme usoro imetosi na muddled mgbe ụfọdụ.
Atụmatụ na iji jikwaa Draịvụ on Linux
Na-esonụ bụ ndepụta nke kasị mkpa iwu iji jide n'aka na na diski ike jisiri n'ụzọ dị irè na-eji Linux os:
View partitions nke ike draịva # fdisk -l / naa / sda iwu bụ na-eji.
Ozugbo nkebi na-kere ọ pụrụ-Ị na iji # mkfs.ext3 / naa / sda7 iwu.
Ele nke nke nkebi # fdisk -s / naa / sda7 4843566 iwu ga-agba ọsọ.
Nkebi table mbipụta iduga ọtụtụ ndị mbipụta na ike draịva-agba ọsọ na Linux os. Koodu pụrụ ịbụ ling maka novice ọrụ ma o nwere na-agba ọsọ na n'otu ụzọ ahụ izere ike mbanye metụtara okwu na Linux:
$ Fdisk / naa / sda
Ọnụ ọgụgụ nke cylinders n'ihi na nke a disk ka atọrọ ka 9729.
Ọ dịghị ihe ọjọọ na na, ma nke a bụ ibu karịa 1024,
na ike na ụfọdụ setups-eme ka nsogbu na:
1) software na-agba na buut oge (eg, ochie nsụgharị nke LILO )
2) booting na partitioning software site na ndị ọzọ OSs
(eg, DOS FDISK, os / 2 FDISK)
Wụk (m maka enyemaka): p
Disk / naa / sda: 80,0 GB, 80026361856 bytes
255 isi, 63 sectors / track, 9729 cylinders
Units = cylinders nke 16065 * 512 = 8225280 bytes
diski nchọpụta: 0xf6edf6ed
Ngwaọrụ buut Malite Ọgwụgwụ nkanka NJ System
/ naa / sda1 1 1959 15735636 c W95 FAT32 (LBA)
/ naa / sda2 1960 5283 26700030 f W95 Ext'd (LBA)
/ naa / sda3 5284 6528 10000462+ 7 HPFS / NTFS
/ naa / sda4 6529 9729 25712032+ c W95 FAT32 (LBA)
/ naa / sda5 * 1960 2661 5638752 83 Linux
/ naa / sda6 3265 5283 16217586 b W95 FAT32
/ naa / sda7 2662 3264 4843566 83 Linux
Nkebi table Ndenye-adịghị na disk iji
Wụk (m maka enyemaka): x
Ọkachamara iwu (m maka enyemaka): f
Ọkachamara iwu (m maka enyemaka): w
The nkebi table e gbanwere!
Akpọ ioctl () re-agụ nkebi tebụl.
> Resource> Naghachi> Top 5 softwares maka Linux data mgbake